यदि तपाईँंले यो प्रतिमा नेभिगेटरमा क्लिक गर्नुभयो भने वा कागगजात सञ्झ्यालको तल्लो दायाँमा, उपकरणपट्टी उपस्थित हुन्छ जसले तपाईँंलाई कागजातको बीचमा अवस्थित लक्ष्यहरू रोज्नुहोस् गर्न सक्षम गर्दछ. तपाईँं पछि माथि वा तल्लो बाँण प्रतिमाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पाठ कर्सर अघिल्लो वा पछिल्लो लक्ष्यको कागजातमा अवस्थित गर्नका लागि.
अघिल्लो पृष्ठ वा वस्तु स्क्रोल गर्नका लागि माथिको बटन क्लिक गर्नुहोस्.
पछिल्लो पृष्ठ वा वस्तु स्क्रोल गर।नका लागि तलको बटन क्लिक गर्नुहोस्.
पूर्वनिर्धारित द्वारा, तपाईँंले कुनै अन्य प्रविष्टि धेरै समयसम्म चयन गर्नु भएको छैन, बाँण बटनहरू कागजातको अघिल्लो वा पछिल्लो पृष्ठमा जान्छ. बाँण बटनहरू कालो हुन् यदि तपाईँंले पृष्ठहरू र निलो मार्फत ब्राउज गर्नुभएको छ यदि तपाईँं अन्य वस्तुहरूमा जानुहुन्छ भने.
द्रष्टव्यहरू लामो गरि अनुकूल भएको छ नेभिगेटर चयन बाकसमा. तपाईँं अन्य जम्प गन्तव्यहरू पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणहरू हुन् रिमाइन्डर, जुन तपाईँंले सेट गर्नुभयो सेट रिमाइन्डर प्रतिमा नेभिगेटरमा. तपाईँं वस्तु चयन गर्न सक्नुहुन्छ तलका विकल्प मध्येबाट नेभिगेसन उपकरणपट्टी: तालिका, पाठ फ्रेम, ग्राफिक्स, OLE वस्तु, पृष्ठ, हेडिङहरू, रिमाइन्डर, चित्राङ्कन वस्तुहरू, नियन्त्रण फाँट, सेक्सन,पुस्तकचिनो, चयन, पादटिप्पणी, टिप्पणी, अनुक्रमणिका द्रष्टव्य, तालिका सूत्र, गलत तालिका सूत्र.
तालिका सूत्रहरूका लागि, तपाईँं कि त तपाईँंको कागजात बीचको सबैमा अवस्थित तालिका सूत्रहरूमा जान सक्नुहुन्छ वा मात्र गलतहरूमा, तपाईँं सूत्रहरूमा मात्र जान सक्नुहुन्छ जुनले त्रुटिमा परिणामहरू निकालेको छ. प्रोग्राम सूत्रहरू त्रुटि परिणामहरू माथि स्किप हुन्छ (तिनीहरू जुनले गलत सूत्रहरूलाई सन्दर्भ गर्दछ).
नेभिगेसन उपकरणपट्टी सँग कार्य गर्दा
खोल्नुहोस् नेभिगेसन उपकरणपट्टी ठाडो स्क्रोलपट्टीमा अवस्थित प्रतिमामा क्लिक गरेर. यसको स्थानबाट तपाईँं उपकरणपट्टी बिच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा तानेर र मिलाएर.
प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् वस्तुहरूको प्रकारका लागि जुन तपाईँं मार्फत ब्राउज गर्न चाहनुहुन्छ. र क्लिक गर्नुहोस् कुनै एक "Previous Object" वा "Next Object" बाँण बटनहरू. यी बटनहरूको नामले वस्तुको प्रकार सङ्केत गर्दछ जुन तपाईँं चयन गर्नुभएको छ. पाठ कर्सर जुनैपनि वस्तुमा अवस्थित हुन्छ जुन तपाईँंले चयन गर्नु भएको थियो.
दोहोरिएको खोजी प्रतिमा नेभिगेसन उपकरणपट्टी सँग तपाईँं खोजी दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईँंले सुरु गर्नु भयो खोजी र बदल संवाद सँग. यो गर्नका लागि, प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्. ठाडो स्क्रोलपट्टीको निलो बाँण बटनहरू अब प्रकार्यहरूमा हुन्छ खोजी बढाउने कार्य निरन्तर गर्नुहोस् र खोजी अघिल्लो निरन्तर गर्नुहोस्. यदि तपाईँंले अब बाँण सतहहरूको कुनै एकमा क्लिक गर्नुभयो भने, खोजी नियमका लागि चालु भैरहन्छ जुन खोजी र बदल संवादमा प्रविष्ट भएको थियो.
Title is: नेभिगेसन